20 Emmy-Nominated Shows Supported by Services from the SIM Group – NAB Show News by Broadcast Beat, Official Broadcaster of NAB Show – NAB Show LIVE
Home » သတင်း » SIM ကဒ် Group မှန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ 20 သူဟာ Emmy-ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးရှိုးများ
SIM ကဒ် Group မှန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ 20 သူဟာ Emmy-ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးရှိုးများ
Los Angeles မြို့ ရတာဟာဆင်းမ်ကဒ် Group မှ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများ 20 အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း 68 ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးထုတ်လုပ်မှုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပေးကြောင်းကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည်th Emmy®ဆုပေးပွဲ။ အဆိုပါ 20 ဘဏ်ဍာ 123 လျာထားခံရစုစုပေါင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူတို့တွင်ဖြစ်ကြောင်း Thrones ၏ဂိမ်း, OJ Simpson v ပြည်သူ့: အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင်နှင့် တဖက် အသီးသီး 23 အဆိုပြုချက်, 22 အဆိုပြုချက်များနှင့် 18 အဆိုပြုချက်, အတူ။
"ကျနော်တို့ကဤသူဟာ Emmy-အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြပွဲအပေါ်ပေးအပ်ထားသောအလုပ်၏အရွယ်အစားနှင့်နယ်ပယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကအတွင်းဧရာမအခွက်တဆယ်ကိုထင်ဟပ်။ SIM ကဒ် Group မှကိုဖြတ်ပြီးကျနော်တို့ဘဝကိုဖို့ထုတ်လုပ်သူများ '' ရူပါရုံကိုဆောင်ကြဉ်းတော်မူသောငါတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဂုဏ်ယူနေကြတယ် "ဟုဂျိမ်းစ် Haggarty, အဆင်းမ်ကဒ် Group ၏ President & CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။
PS ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပေးရန်ချုပ်ကိုင်နှင့်အလင်းရောင် packages များထောက်ပံ့ ဘိတ်မိုတယ်, SIM ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မှကင်မရာများပေးအပ် OJ Simpson v ပြည်သူ့: အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင် နှင့် မစ္စတာစက်ရုပ် နှင့် Bling အပေါ်အော့ဖ်လိုင်းငှားရမ်းမှုများပေးအပ် အတည်ပြုခြင်း, မိဘမဲ့က Black နှင့် ကြည်လင်သော ရန်နေ့စဉ်သတင်းစာများပေးစဉ် (Chainsaw လည်း avid ထောက်ပံ့) မစ္စတာစက်ရုပ် နှင့် အတည်ပြုခြင်း။ ပေါ်န်ဆောင်မှုပေးအပ်အားလုံးသုံးကုမ္ပဏီများမှ မဟုတ်သော. Thrones ၏ဂိမ်း, အဆိုပြုချက်, Chainsaw ထံမှအသုံးပြုသွားမည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုအတွက်ခေါင်းဆောင်ပြုသကဲ့သို့ ဂျိန်းဟာဗာဂျင်း။ အပါအဝင်အဖြစ်မှန်ပြပွဲ အဆိုပါ Amazing Race, Project မှ Greenlight, ငါးမန်းအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အဖြစ်မှန်ပြိုင်ပွဲ ဒါဆိုမင်းကမင်းကနိုင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နှင့် American Idol အားလုံး Chainsaw မှာကိုလက်စသတ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ထွက်ပတ်လည်စေရန်, အဆိုပါ 73rd နှစ်ပတ်လည်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲ, အော်စကာဆုအတွက် နှင့် ဒါဟာသင့်ရဲ့ 50 င်th ခရစ္စမတ်, ချာလီဘရောင်း အားလုံး Chainsaw ထံမှအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Tattersall အသံ & ရုပ်ပုံပေါ်သောအသံန်ဆောင်မှုများပေး တဖက်, ပဲန်နီကြောက်မက်ဘွယ်သော နှင့် ဗိုက်ကင်း.
သူတို့ရဲ့အဆိုပြုချက်အပေါ်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, စတူဒီယိုနှင့်ကွန်ရက်များရန် "ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အရည်အသွေးအအစီအစဉ်များကိုမိမိတို့ကတိကဝတ်ရှင်းလင်းစွာ resonated ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လုသောငါတို့အဖွဲ့ကစိတ်အား, "Haggarty ကဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ 68th သူဟာ Emmy Awards ဆုအတွက်တနင်္ဂနွေ, ABC ရုပ်သံအပေါ်စက်တင်ဘာလ 18th လေတော်မူမည် Chainsaw ဟာဆန်ခါတင် packages များကိုတည်းဖြတ်အပေါင်းတို့နှင့်ရုပ်ပုံပြီးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ SIM ကဒ် Group မှအကြောင်း:
တိုရွန်တို-based ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကျောက်အပေါင်းအဖေါ်များအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည့် SIM ကဒ် Group မှထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, workflow နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးများမြောက်အမေရိက spanning နှင့်တကွ, ဆင်းမ်ကဒ် Group သည်အော်စကာဆုရှင်ရုပ်ရှင်ဖို့ ", Thrones ၏ဂိမ်း" ထိုသို့သောအကျယ်အောင်မြင်သောဖို့မကြာသေးမီကဖြန့်ချိ "Warcraft," အဖြစ်အင်္ဂါရပ်များအဘို့ကြယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါသည် "Spotlight ကို။ " "အပါအဝင်အဖြစ်မှန်ပြပွဲ မှစ. American Idol "Blockbuster ဖို့" Deadpool "နှင့်စီးရီး hit" ဟုမစ္စတာ စက်ရုပ် "ဆင်းမ်ကဒ် Group မှဘဝသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုရောက်စေဖို့ထုတ်လုပ်သူများ, ဒါရိုက်တာ, ရိုက်ကူးရေး, Post-ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်စတူဒီယိုနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ တိုရွန်တိုနှင့်ဗန်ကူးဗား PS ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့်ချုပ်ကိုင်ထားနှင့်အလင်းရောင်ပေးသည်နှင့်ကနေဒါတွင်၎င်း၏ရုံးခန်းမဆိုထံမှ SIM ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ပညာနှင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပြည့်စုံစေနိုင်သည်, အတ္တလန်တာနှင့် Los Angeles မြို့။ Bling, Chainsaw, Pixel မြေအောက်, Tattersall အသံနှင့်ရုပ်ပုံနဲ့ Post စက်ရုံနယူးယော့အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်ရောစပ်အသံဖို့, နေ့စဉ်သတင်းစာများအနေဖြင့်, အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းတည်းဖြတ်ရန်, နောက်ဆုံးအရောင် / ပစနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုမှန်ဆောင်မှုတစ်ခုခင်းကျင်းသည်။ Bling POD (On Demand ကို Post ကို) မှတဆင့်ပြည့်စုံပြည်ပမှာအမေရိကန်, ကနေဒါနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အဖြစ် Off-site ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Chainsaw စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်း colorists အချို့နှင့်အတူဖန်တီးမှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်ကျယ်ပြန့်ပြီးန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ pixel မြေအောက် Tattersall အသံနှင့်ရုပ်ပုံအသံကအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့ဖော်စပ်တစ်ဦးပံ့ပိုးပေးစဉ်ကိုလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဖိုင်-based မီဒီယာပွညျ့စုံနှင့် encoding က / ဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်တိုရွန်တို-based Post-ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Post ကိုစက်ရုံနယူးယော့အရှေ့ကမ်းခြေရဲ့ထိပ်တန်းလွတ်လပ်သော Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် simgroup.com
ဆုပေးပွဲ သူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲ post ကိုထုတ်လုပ်မှု ရုပ်မြင်သံကြား တီဗီနည်းပညာ	2016-07-18
ယခင်: IBC2016 မှာ Viaccess-Orcas ကနေစမတ်နှင့်လုံခြုံတဲ့ဖြေရှင်းနည်း
နောက်တစ်ခု: IBC2016 ပြသခဲ့သည်ကို Preview မှာ Amagi